Barron Area Community Center | Fitness Center
Isniinta: 5:30 AM - 9 PM
Talaado: 5:30 AM - 9 PM
Arbaco: 5:30 AM - 9 PM
Khamiista: 5:30 AM - 9 PM
Jimco: 5:30 AM - 9 PM
Sabti: 8 AM - 7 PM
Axad: 1 PM - 6 PM
Saxeex wargeyskeena halkan!
Our newsletter here!
Sannadkii 1988, qoyska Wallace H. Jerome, oo u sii mariyey Wallace H. Jerome Foundation, Inc., ayaa hadiyad $ 1,000,000 ah u soo bandhigey Beesha Barron (markii dambena loo kiciyey $ 1.2 milyan) si loogu isticmaalo dhisidda xarun bulsho oo lagu xasuusto marxuum Marion E. Jerome. Bulshada ayaa lagu xujeeyay inay soo aruursadaan lacago u dhigma hadiyada. Bulshadu waxay iswaafajisay oo dhaaftay hadiyaddii Jerome si loogu maalgeliyo mashruuca $ 2,650,000.
Xarunta waxaa loo qorsheeyay inay tahay xarun lagu qanciyo baahiyaha Iftiimiyaasha, Dugsiyada Deegaanka Barron, Magaalada iyo ururada kale ee maxalliga ah. Hadafka Xarunta waa in lagu dadaalo sidii loo dabooli lahaa baahiyaha dhaqan, waxbarasho, madadaalo iyo bulshada ee dadka deegaanka Barron.
Iyadoo loo marayo dadaalka wadajirka ah ee dadka deegaanka, ururada, ganacsiyada, iskuulada, iyo Magaalada, Xarunta Beesha Barron waxay noqotay mid dhab ah. Sababtoo ah kaqeybgalka firfircoon iyo taageerada dadka deegaanka Barron, xaqiiqda Xarunta Barron Area Community waxay shaqsiyaadka siisaa fursad ay ku kobciyaan noloshooda shaqsiyadeed iyo inay sare u qaadaan tayada noloshooda.
Waqtigaan la joogo, Xarunta Beesha ee Barron waxaa ku raaxeysta oo ka faa'iideysta ururo kala duwan, ganacsiyo, degmo dugsiyeedyo, iyo shaqsiyaad ka badan 350 maalmood sanadkii. Xarunta celcelis ahaan celcelis ahaan booqashooyinka sanadlaha ah ee 180,000 waxayna leedahay in kabadan 1500 xubnood oo ka socda 38 beel & magaalo.
Xarunta Bulshada ee Barron (BACC) waa shirkad aan faa'iido doon ahayn oo loogu talagalay inay ku dhiirrigeliso qaab nololeed caafimaad leh iyada oo loo marayo fursadaha jimicsiga bulshada, dhaqanka, madadaalada, iyo jir ahaaneed. BACC waxay u adeegtaa aag gobollo badan ah, oo guud ahaan ka badan 200,000 booqasho sanadkii iyo 2,000 xubnood oo firfircoon. Xarunta waxaa ku jira 500 oo fadhi tiyaatarka farshaxanka wanaagsan, socodka / socodka orodka, jimicsi, barkad, laba barxadood oo racquetball ah, qolka culeyska / jir dhiska, qolka jimicsiga, iyo goobta kulanka
Himilada BACC waa in la siiyo dad badan intii suurtagal ah ee ay ku noolaan karaan qaab nololeed caafimaad qaba. Tan macnaheedu waa BACC waxay lashaqeysaa shirkado badan oo caymis kaladuwan iyo ganacsiyada maxalliga ah si ay u bixiyaan xubinnimo jaban. Na weydiiso maanta si aan u ogaano sida ay u qiimo jaban yihiin xubinnimada BACC!
By 2020 waxaa qoray BACC. Si sharaf leh loogu abuuray Wix.com